भाेलिकाे समाचार …५०वर्षिय पुरूषलाई काेभिड १९ काे संक्रमण ! - Sanchar Post
काठमाण्डौ : covid 19खोलाको किनारमा सुकुम्वासी वस्ति छ। लहरै वनेका जस्ताले छाएका भुइ घरहरु भन्दा केही पर राम वहादुरको अर्को एउटा त्यस्तैघर छ। २ छोरा छोरी र श्रीमती सहित वस्दै आएको रामवहादुरको जीवन ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा भइरहेको छ। घरको वरिपरको जिर्ण घेरावेरा पोहोरसालै फेर्ने विचार गरेको थियो, खोलाले वगाएन र रहेछ भने आउने साल फेरौला भनेर वाटो हेर्यो । हुन त यसरी उसले खोलाको वाटो हेरेको २, ४ वर्षैपनि भइसकेको छ । पांच कक्षा सम्म चै छोरिलाइ पनि पढाएकै हो । आमाले दिनभरी खोलामा गिटि कुट्नु पर्ने हुदा घरमा भरथेग गर्ने भइहाली भनेर छोरिलाइ स्कुल नपठाउने निधो गरे पनि छोरो भने विध्यालय जादैछ । फेल नभएसम्म छोरा चाहिँ विध्यालय जादैगरोस भन्ने उनिहरुको घर सल्लाह भएको पनि छ । आफ्नो ज्याला मजदुरी र श्रीमतिको गिटि कुटाइले घर राम्रै संग चलेकै छ । विहानवेलुकाको छाक मात्र हैन वेला वेलामा मासु रक्सिमा रमाउन समेत पुग्ने गरेको छ । वर्तमान चलेकै छ भविष्यकालागी पाखुरा छदैछन ।
छोराछोरिको करकापले घरमा टि भी जोड्ने योजना २ ४ पटक वनेपनि वन्दोवस्त भइहालेको छैन । वरु अलिपरको घरमा छोराछोरी संगै पछिलागेर कहिलेकाहि श्रीमान श्रीमतिनै टि भि हेर्न जान्छन र रहर मेट्छन।
` चिन वाट शुरुभएको कोरोनाले इटलिमा ……मानिस मरे , अमेरिकामा …..मानिस मरे , संसारमा संक्रमितहरु …..पुगिसक्यो, नेपालमा पनि फैलदै छ ।` टोलवासीलाई यस्ता समचारले खासै तताउदैन थियो । सात समुन्द्रपारिको समाचार यो वस्तिमा आइपुग्दा त्यसै सेलाइसकेको हुन्थ्यो । दैनिक आइरहने यस्ता समाचारहरु रामवहादुरको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन थिए न महत्व दिन्थ्यो न तिनले प्रभाव पार्थे। तर साहुकोमा काम गर्न जांदा उसले एकदिन अनायासै अवरोध झेल्नु पर्यो । वाटोमा सवारी चलेका थिएनन । मानिसहरुपनि पातला देखिन्थे । सुरक्षाकर्मीहरु आवतजावत नियन्त्रण गरिरहेका थिए । उसलाइपनि गन्तव्य तर्फ जान दिइएन र फर्काइदिए । वल्ल उसले कुरो वुझ्दै गयो । नेपालमा पनि कोरोना प्रवेशगरिसकेको र संक्रमितको संख्या दैनिक थपिइरहेको । औषधि उपचार नभएको सरुवारोग हुनाले सरकारले आवतजावत र भेटघाट पुर्णरुपले बन्द गर्न lockdown घोषणा गरेको । यो सवै वुझेपछि रामवहादुर फर्केर घर गयो । घर पुगेपछि अझ प्रष्ट भयो ,छोराको स्कुल र श्रीमतिको धन्दा पनि बन्द भएछ । परिस्थितिसंग सम्झौता गरेर रामवहादुरका दिनहरु घरमै वित्न थाले । हफ्ता दशदिनभइसक्यो वन्दावन्दी झन घनिभुत हुँदै गयो । यता घरमा अन्नको जोहो सकिदै गयो । जेनतेन दुई छाक टर्दैथियो ,अब भने एकछाकले दिन काट्नु पर्ने भयो । जे पर्ला पर्ला भनेर राति नै उठेर साहुकहा गयो । गेटमा ताला देखेर वोलायो । तर महामारी फैलिसकेको र सरकारले नै बन्द गरेकोले तत्काल काम नखुल्ने कुरा वुझेपछि विकल्प विहिन भएर घरतिर फर्कियो । वावुको प्रतिक्षामा वसेका छोराछोरि संग नवोलि घरको आंगनमा टुक्रुक्क वस्यो र श्रीमतिको अनुहारमा पुलुक्क हेर्यो । श्रीमानको विवशता वुझेर श्रीमती घरभित्र पसी । भित्रवाट लुकाएर राखेको ५०० को नोट र नाकको फुली झिकेर ल्याइ र श्रीमानको हातमा राखिदिइ ।
` फुली चै नखोल , यति भए २, ४ दिनलाई धानिएला अनि त केही उपाय गरौला नि ´
श्रीमानलाइ भरथेग गर्दै श्रीमतिले भनी ` परेको वेला कामलाग्छ भनेरै त लगाको हो नि गहना, लैजाउ चामल च्युरा के के पाइन्छ लिएर आउ ´
श्रीमतिको गहनाको नाममा भएको जम्मा एउटा फुली पनि वेचेर खानुपर्दाको पीडा लुकाउदै दोकान तिर लाग्यो राम वहादुर ।
सात दस पन्ध्र हुँदै दिनहरु वितिरहे ।वन्दावन्दि झनझन कसिलो हुँदै गयो । काम गरेर गुजारा गर्ने सम्भावना पनि हराउदै गयो । घरको जोहो फेरि रित्तिदै गयो । चुल्हो नवल्ने देखेर पीर थपिदै गयो । हतास मनस्थिति वोकेर राम वहादुर वस्तितिर लाग्यो। आशाको दियो फेरि वल्यो । राहत वितरणको लागि तयारी गरिदै रहेछ । सहि मौकामा पुगेकोले आफूलाइ भाग्यमानि संझिदै राहतको लाइनमा लाग्यो र राहत पनि मनग्ये पायो ,चामल च्युरा आलु तेल आदि आदि । राहत दाताहरुको अनुरोधमा फोटो पनि खिचायो मुहार पुस्तिकामा राख्न । राहतको भारी वोकेर विजयी मुद्रामा राम वहादुर घर फर्कियो । राहतभित्रिए संगै घरमा खुशी र सन्तोसको संचार भयो ।
४, ५ दिन पछि राम वहादुरलाइ एक्कासी ज्वरोले थला पार्यो । श्रीमतीको पानी पट्टिले पनि काम गरेन ज्वरो वढिरह्यो । खोकि पनि थपियो अनि सास फेर्न गारो हुनथाल्यो । छोराले छिमेकिलाइ थाहा दियो । केहिक्षण पश्चात् छिमेकिहरु उसको घर छेउछाउ भेला भए र परपर वाट चिहाउन थाले तर न कोहि सोध्न आए न नारी छाम्न । एकैक्षणमा एम्वुलेन्स आएर घरअगाडी रोकियो । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणसहितको अनौठो पोशाक लगाएका मानिसहरु ओर्लिए । उनिहरुको इशारामा परिवारका सदस्यहरु पनि राम वहादुर वाट टाढा भागे । उ लगातार वेदनामा छटपटिरहेको थियो ,कुनै तन्ना जस्तो प्लास्टिकको वस्तुमा राम वहादुरलाई वेरियो र गाडीभित्र राखेर हुइक्याइयो । राम वहादुरका परिवारलाइ क्वारेन्टाइनमा राखन अन्यत्र कतै लगियो । राहत वितरणसंगै कोरोना फैलिएको सुचना सहित वस्ति सिल गरियो । भोलिपल्ट समाचारमा प्रसारित हुदैथियो ` ….वस्तिका ५० वर्षिय पुरुषलाइ covid 19 को संक्रमण´
लेखक कोइराला प्रहरी नायव उपरीक्षक हुन् ।
जेनिफरको लोभै लाग्दो तस्बिर !
भूकम्पपीडितले सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी ३ लाख ऋण लिन पाउने